Indlela ephambili yokonyango yokutya isondlo esifanelekileyo, njengoko inceda ukubuyisela iinkqubo zesisombululo emzimbeni. Ukuba isigulane asihambanga ukutya, ke akukho unyango oluya kumnceda: igulane iya kuqhubeka, ngakumbi kwaye ngaphezulu, bonke baya kuba neengxaki zokubamba, ekugqibeleni, kuya kubakho ukukhubazeka. Makhe siqwalasele ukuba zeziphi iimpawu kunye nesondlo esifanelekileyo.
I-Gout yisifo esibangelwa sisifo se-metabolic, kwaye sikhokelela ekunyuseni kwinqanaba le-uric acid egazini, iifake kwiifomthi zetyu (zayo). Iimbangela ze-gout zihluke ngokupheleleyo. I-gout Primary isifo esingazalwanga ngama-enzyme esithatha inxaxheba kwiintlobo zesistim ze-uric acid, i-gout yesibili-engafanelekanga i-urric acid metabolism, ezibangelwa esinye isifo.
Xa igulane lenziwa inani elikhulu leempawu, ezifakwe kwiifom. Kwiimeko ezininzi, iintso kunye namaqabane ahluphekile. Xa ugxininisa ukungena kwiisishu, ama-node akhethekileyo ayenziwa-i-gouty tofas.
I-Gout ayibonakali ngokukhawuleza, okokuqala, ukuphazamiseka kwamagciwane okuqokelelwa iminyaka ngaphambi kokuba baziwa ngendlela yokuhlaselwa kwe-gout. Uyakwazi ukubona umbane kwisigaba esilandelayo ngokwenza uvavanyo lwegazi: xa uhlalutya, uza kubona inani elongezelelweyo lokuhamba.
Ukuhlaselwa kwe-gout kuboniswa ukuvuvukala komnxeba omnye ngexesha le-crescent, kwaye kugqitywe ngokubuyisela kwangaphandle. Kodwa, ebonakalayo kanye, ukutshatyalaliswa kuya kubakho kwakhona, kwaye kube yinde. Ngokuqhelekileyo bayichukunyiswa ziziintlobo ezahlukahlukeneyo zesondlo (ukutya okuninzi kwenyama, utywala obunxilisayo, njl.). Emva kwexesha elithile (kuxhomekeke ekudleni), le nkqubo inokungena kwisifo esingapheliyo, ukuhamba kwamalungu amaninzi, umsebenzi wabo uphazamisekile. Ukuba utshintsho lweengqungquthela luyongezwa kule nto, iprotheni ivela kumchamo, ukunyuka kwengcinezelo yegazi, kunye nemiqondiso ye-pyelonephritis ibonakala (ukubola kwesibindi).
Isondlo se gout.
Xa i-gout iphazanyiswa i-catabolism (inkqubo yokubola) ye-purine nucleotides. Ngenxa yoko, iimveliso eziphakathi kokuchithwa kwe-uric acid kunye neeriti zayo ziqokelela.
Izigulane ezine-gout kufuneka zinciphise kwimveliso yazo yokutya ezityebi kwiisiseko ze-purine. Ngako oko, akufanele basebenzise i-sardines, i-pate, i-herring, i-sprats, isibindi, iintso, ubuchopho, iibhontshisi, iimbotyi, iigrafu, iibhontshisi, iilenti, i-nuts, ithokoleta, iziyobisi, ikofi, i-cocoa. Akukhuthazwa ukuba udle inyama yezilwanyana eziselula. Intlanzi kunye nenyama zingadliwa ngendlela ebilisiwe kungekho kathathu ngeliveki (ngoko unako ukupheka okanye ukupheka).
Eyona nto ayinayo iziqhamo ze-purines, amaqanda, okusanhlamvu, ilayisi, iitapile, ubisi. Ukukhulula iintsuku kuboniswa-iziqhamo, ubisi, iifatati. Ukutya kwe-alkaline-ukutya kwemifuno kubaluleke kakhulu.
Kucetyiswa ukuba ulungiselele iintsuku zokulayisha kwakhona emva kwenyanga, kufuneka ukhethe iintsuku ezithile kule nto. Ngalesi sikhathi kuyimfuneko ukusela isiselo esininzi se-alkaline-i-juice, amanzi alula, amanzi amancinci amancinci. Emva kwosuku lokuzila, i-metabolism iqalisa ukusebenza kunye ne-redoubled force, isigulane sinokufumana amandla kunye namandla:
iintsuku zobisi obomuncu bokukhupha i-kefir zingasetyenziswa; ngelixa bahlula i-1, 5 ilitha ye-kefir ibe ngama-5-6;
berry okanye izityalo ukukhulula iintsuku - zihamba kakhulu ehlobo nasekwindla; ama-apricot afanelekileyo, ii-apula, iibhanana, i-cherry, i-cherries, i-strawberries, i-raspberries, i-currants, iidiliya, i-watermelon, njl .; kuya kuba luncedo ukusebenzisa ngaphezulu kwesinye isiqhamo saso, kodwa eziliqela ngeyodwa, faka ijusi elitsha elitsha ngokutya kwakho; ungadla 1-1, 5 kg yeebhanki okanye iziqhamo kwiincinci ezincinci, kungcono ukudla ngendlela yealadi (iziqhamo zixutywe kwi-grater okanye zicutswe ngokukhawuleza), zichithwe nge-orange okanye ijusi yamanoni;
Iipatato zikhulula ukutya-kuzo zonke izitya, iifatata kufuneka ziphekwe ngendlela efanayo kwaye zicocwe; Ungadla iizambatho ezibilisiwe, ezibhaka, ngendlela ye-puree ebisi; Ngomhla, kudliwa amazambane ama-5.
Imenyu nganye yemihla yezigulane.
Ukutya kwasekuseni: ingilazi ye-yezhenka okanye i-kefir, isantikiki kunye ne-ukhilimu omuncu kunye nebhotela, iqanda.
Isidlo sasekuseni sesibini: ibhanana, i-orange okanye i-apula.
Isidlo: isobho semifuno, inxalenye encinci yentlanzi ebilisiwe okanye inkukhu (ayikho ngaphezu kwezi-3 ngeveki), kwiintsuku ezisele - i-curd casserole, ihoxise imifuno, iigwangu zeshizi, i-pancake, njl. iglasi yezandi zerayisi.
Ngentambama i-snack - isaladi yesithelo, enomdla we-lemon juice.
Ukutya okudliwayo - iifatata ezifihliweyo kunye nemifuno okanye ibhotela nobisi, okanye iglasi ye yogurt okanye i-yazhenka, imifuno enomthi.
I-Gout isifo sesifo, kwaye ngoko ke, kulo mzekelo, ukutya okulungileyo ngenye yeentlobo zonyango.
Iingcebiso malunga nendlela yokutya okulungileyo
Ii-Chips, ngaba kuyingozi kwimpilo yabantu?
Ama-biscuits e-Ginger nama-crranberries
Buza ngeekhitshi zekakhukhunathi
Ukunyusela ibisi yaseJapan njengendlela efanelekileyo kakhulu yokuhlinzwa ngoplastiki
Iyini inani loBathathu Emnye ngo-2016 le-Orthodox kunye namaKatolika
Ukuzalwa komntwana wesibini: njani ukugqiba oku?
Kwaye kwaziwa indlela uKsenia Sobchak noMaxim Vitorgan babetha ngayo unyana wabo
Into ebalulekileyo yobundlobongela besini
Isidlo sinconywe ukuba idiphozi yesitro
Iingubo zezonyango zabantwana ezisanda kuzalwa